“ဒါဖြစ်တတ်တဲ့နေ့တနေ့ပါ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » “ဒါဖြစ်တတ်တဲ့နေ့တနေ့ပါ”
Posted by Green Rose on Sep 4, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, My Dear Diary | 13 comments
တရက်မှာရုံးကို Green Rose နဲ့ သင်တန်းတစ်ခု အတူတက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပါ။ အဲလိုနဲ့ အလုပ်လေးတွေလုပ်ရင်း သူဖုန်းဆက်စရာ ကိစ္စရှိတော့ Green Rose တို့ရုံးကဖုန်းကို ခွင့်တောင်းပြီးဆက်ပါတယ်။ Green Rose က သူ့ခါးကြားက Hand Phone ကြီးကိုမြင်နေရတော့ နည်းနည်း အူယားလာပါတယ်။ ဘယ့်နယ့် ဒီလူက ဖုန်းကြီးရှိရက်နဲ့ သူ့ဖုန်းနဲ့တော့ မခေါ်ပဲ သူများဖုန်းနဲ့ ခေါ်နေတယ် ၊ ဒါသက်သက်ကြောတာပဲ လို့စိတ်ထဲက ထင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောတော့မပြောမိပါဘူး။ နောက်တော်တော်ကြာတော့သူ့ဖုန်းက ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး အထွက် Call ခေါ်လို့မရဘူး အဲဒါ ကြည့်ပေးပါဦးလို့ပြောလာပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ Green Rose လည်း မတတ်သည့်ပညာ မနေသာပေါ့လေ ဟိုကလိ ဒီကလိ ပေါ့။ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ သူ့ဖုန်းကြီး Green Rose လက်ထဲ ထည့်ထားခဲ့ပြီး လျှောက်သွားနေလေရဲ့။ အင်းပေါ့လေ သူ့ဖုန်းက အထွက်မှခေါ်လို့မရတာ စိတ်ချ လက်ချ ထားခဲ့လို့ရပြီပေါ့။ အဲလိုနဲ့ Green Rose လည်း Lock ကျနေတာတွေ လိုက်ရှာဖွင့်ပြီး အစမ်းခေါ်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းပိုင်ရှင်ကလည်း အနားမှာမရှိ၊ သူ့ဖုန်းထဲက contact တွေကိုလည်း ကိုယ်မသိ ဆိုတော့ ဘယ်ကိုခေါ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားပြီး Green Rose ရဲ့ဖုန်းကိုပဲ ပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
တူ… တူ….တူ….ဆိုတဲ့ ဖုန်းခေါ်နေတဲ့အသံနဲ့ တဆက်တည်း ဟယ်လို ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထူး တဲ့အသံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ Green Rose ရဲ့ ဖုန်းက စားပွဲပေါ်မှာ ငုတ်တုတ်.. တုတ်တုတ်မှမလှုပ်… .. အဲဒါနဲ့ Green Rose လည်း အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားပြီး ပြန်ပြောလိုက်မိတာက “ဒါ Green Rose ရဲ့ဖုန်းများလားရှင်” တဲ့။
ဟိုက မဟုတ်ပါဘူးရှင် ဆိုတော့မှ ဆောရီးပါနော် လို့ပြောပြီးဖုန်းချလိုက်ရတယ်။ အဲဒီ့အချိန်အထိလည်း လူက သေချာမစဉ်းစားမိသေးဘူး။ နောက်မှ ကိုယ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ နံပါတ်ကို ပြန်စစ်ကြည့်မှ နံပါတ်မှားပြီးခေါ်ထားမိတာကိုး……. တော်သေးတာပေါ့ ဖုန်းခေါ်နေတဲ့အချိန် အနားမှာ ဘယ်သူမှမရှိလို့ .. နို့မို့ဆို အရူးလို့အထင်ခံရမှာ…
နာ.. နာ.. နာ..နာ.. နာ.. နာ.. နာ.. နာ.. ဒါဖြစ်တတ်တဲ့နေ့တနေ့ ပါ….(ချစ်သုဝေ ၏ သီချင်းစာသားကို ကူးချပါတယ်ရှင့်)
Green Rose ရေ သေချာလည်းကြည့်ခေါ်ပါအုံး၊ တော်ကြာအဖြေရခတ်တဲ့နေရာခေါ်မိမှဖြင့်–။
တခါက ဖုန်းဆက်ပြီး အမေရောလို့ မေးတာနဲ့ ကိုယ်ကလည်း ခပ်ကြောင်ကြောင်နဲ့ အမေ့ကို ခေါ်ပေးလိုက်သေးတယ်။ ပြီးတော့မှ မာသားကြီးရဲ့ ကွိစိကွစကို ခံယူလိုက်ရတယ်။
ဟဟ.. ဖြစ်တတ်ပါတယ် …
ကိုယ်လဲ အကြိမ်ကြိမ်မှားဖူးပါတယ် ….
သူများလဲ မှားခေါ်တာတွေ ရှိပါတယ်.. တစ်ခါက ဆို ဖုန်းလာလို့ ကိုင်လိုက်တာ
ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ … မိန်းမ လား … ကိုယ် ဒီနေ့ပြန်မလာဘူးနော် တဲ့ … ပြောပြီး ဖုန်းချသွားလိုက်တာ
mayjuly ဆီ ရောက်သွားတာလား။
စောရီးဗျာ အနူးအညွတ် တောင်းပန်တယ် နော်။
( ယုံနဲ့ ဘာဖုန်းမှ မရှိဘဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဖောကြည့် တာ။ )
ကျုပ်ဆီကို ပေါက်စမလေး တစ်ယောက်ဖုန်းမှားဝင်ဖူးတယ်
ဘာလို့ လှည့် ပြန်သွားတာလဲ တဲ့ 
ကျုပ်လဲပြန်လာခဲ့ မယ်စောင့် နေ လို့ ပြောလိုက်တယ်
ဘယ်တော့ဝဋ်လည်မလဲ မသိဘူး
ဟုတ်ကဲ့ ပြောနေပါတယ်။ မိရို့စ် ညည်းကလည်းအေ ငါပို့လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းရောက်ပြီလားတဲ့။ ဟင့်အင်း မရောက်သေးဘူး။ လေယာဉ် ရာသီဥတု မကောင်းလို့ ပစ္စည်းပို့တဲ့ဆီက မနက်ဖန် မှရောက်မှာလို့ ပြောတယ် အန်တီလို့ပြောတော့။
-ငါက မောင်ဝင်းနဲ့ မုန့်ဟင်းခါးပို့ခိုင်းလိုက်တာတဲ့ ရောက်ပြီလားမေးတာတဲ့။ ကြည့်ရတာ အိမ်နီးနား ချင်းမို့။ အလှူလုပ်လို့ ပို့တာထင်တယ်။ ပို့တဲ့ အန်တီကြီးက ကလေးလေးကို ပို့ခိုင်းလိုက်လို့ မှောက်မှာစိုးလို့ ဖုန်းဆက်လှမ်းသတိပေးလိုက်ပုံရတယ်။ (တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ အဲဒီအချိန် မှာ Rose ကလည်း ပန်းမျိုးလေးလိုချင်လို့ အဒေါ်ဆီက မှာထားတယ် လေ)။
– ကိုယ်လဲ ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်။ အန်တီနာမယ်ဘယ်သူလဲမေးတော့ ကိုယ်လုံးဝမသိတဲ့ နာမယ် နဲ့ဖုန်း မှား ၀င်လာတာ။ တိုက်ဆိုင်ပုံများနော်။ လွဲချက် က လွဲချက်က။ ဟီးဟီး အဲလိုအဲလို။
ဖြစ်တက်တဲ့ နေ့ ဖြစ်တက်တဲ့နေ့
ဖြစ်တတ်ပါတယ် ဂျီးဒေါ်ရယ် ..
ကိုယ်တွေ့လေး ဖောက်သည်ချရရင် ..
တစ်ခါက အနော်တစ်ယောက်တည်း ငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက်နဲ့ လမ်းလျောက်နေတုန်း
တောင်မလေး တစ်ယောက်က ပြေးဖက်သဗျ ..
ဂယ်ပြောဒါ .. (ယုံဘာခည ..)
အနော်ဂ အဲ့လိုမျိုး ဖြစ်ရင် ဘီလောက် ကောင်းလိမ့်မတုန်းလို့ တွေးနေတဲ့အချိန် ..
တောင်မလေး ဂလည်း ပြေးဖက်လိုက်ချိန်က တိုက်ပဲ တိုက်ဆိုင်လွန်းခဲ့သဗျာ ..
ဒါက ပြန်လည် ဖောက်သည်ချဒါဘာနော် .. အဟီးးးး
အခုဖုန်းပြောနေတာ ကျွန်တော်လားဟင် ပေါ့နော်…
အဟိ အဟိ ခွ်ိ ခွိ….ပေါ့နော်…
green rose ကံကောင်းတယ်…. ဖုန်းပိုင်ရှင်ဘေးနားမှာ မရှိတော့လို………….. တကယ်လို့များ ဖုန်းပိုင်ရှင်တာ ဘေးနားမှာရှိရင်…… သူဖုန်းဘေ ကုန်ပြီးဆိုပီး ပွားနေဦးမယ်……….
သူလေးဘဲဂျ .. ခွိခွိ ..
ကိုခင်ခ၊ Pooch ၊ Mayjuly၊ GodTM ၊ Surmi ၊ Rose Minn ၊ မဟာရာဇာအံဇာတုံး ၊ Wow ၊ အလင်းဆက် ၊ Si Tone ၊ ဖတ်ရှုအားပေးကြတာကျေးဇူးပါနော်။ Green Rose ရဲ့ ပို့စ်လေးကိုဖတ်ပြီး မရီနိုင်ရင်တောင် ပြုံးမိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ဖုန်းမှားဝင်တာတွေက စိတ်ညစ်ရပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျရင်တော့ ပျော်စရာ ကောင်းပါတယ် နော်.